Qoraaga - Word Foundation • Ku saabsan Harold Waldwin
Sida Harold W. Percival ku tilmaamay Qoraaga Hordhaca ah Fikirka iyo Dareenka, wuxuu ka doorbiday inuu qoro qormadiisa asalka. Taas awgeed ayay ahayd inuusan jeclayn inuu qoro taariikh nololeed ama in taariikh nololeed la qoro. Wuxuu doonayey in qoraalladiisu ku istaagaan qaddarintooda. Ujeeddadiisu waxay ahayd in ansaxnimada weedhihiisu aanay saameyn ku yeelan shakhsiyaddiisa, laakiin lagu tijaabiyo iyadoo loo eegayo heerka aqoonta is-akhris ee akhrista kasta ku dhex leeyahay. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay rabaan inay wax ka ogaadaan qoraaga qoraalka, gaar ahaan haddii ay ku lug leeyihiin qoraalladiisa.
Marka, xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan Mr. Percival ayaa halkan lagu xusay, faahfaahin dheeraad ahna waxaa laga heli karaa tiisa Hordhaca Qoraaga. Harold Waldwin Percival wuxuu ku dhashay Bridgetown, Barbados bishii Abriil 15, 1868, wuxuuna ku dhashay beero ay leeyihiin waalidkiis. Wuxuu ahaa kii seddexaad ee afar carruur ah, midkoodna kama badbaadin. Waalidiintiisa, Elizabeth Ann Taylor iyo James Percival waxay ahaayeen Masiixiyiin cibaado leh; haddana in badan oo ka mid ah wixii uu maqlay isagoo ilmo aad u yar uma muuqan kuwo macquul ah, mana jirin jawaabo lagu qanco oo su'aalahiisa faraha badan. Wuxuu dareemay inay jiraan kuwo wax garanaya, da'diisuna aad u yar tahay wuxuu go'aansaday inuu helo "Kuwa Caqliga leh" oo wax ka barto. Markii sanado laga soo gudbay, fikradiisii ​​ahayd "Kuwa Caqliga leh" ayaa isbedelay, laakiin ujeeddadiisii ​​ahayd inuu helo Is-aqoon ayaa baaqi noqotay.
Markuu toban jir ahaa, aabihiis wuu dhintay hooyadiina waxay u guurtay Mareykanka, waxayna degtay Boston, markii dambena waxay degtay magaalada New York. Wuxuu ilaalinayay hooyadiis qiyaastii saddex iyo toban sano ilaa ay ka dhimatay 1905. Percival wuxuu xiiseynayay Theosophy wuxuuna ku biiray Theosophical Society 1892. Theosophical Society Independent, oo la kulmay si loo barto qoraalada Madame Blavatsky iyo "Qorniinka" bariga.
1893, iyo laba jeer markale afar iyo tobanka sano ee soo socda, Percival wuxuu noqday "mid miyir qaba," Wuxuu yiri qiimaha waayo aragnimadani waxay ahayd inay u suurta gelisay inuu wax ka ogaado maaddo kasta hanaan maskaxeed uu ugu yeeray. fikirka dhabta ah. Wuxuu yiri, "Inaad miyirqabto Miyir qabka waxay muujineysaa 'wax aan la aqoon' qofka miyir qabay."
Sannadkii 1908, iyo dhowr sano, Percival iyo saaxiibo dhowr ah ayaa iska lahaa oo ka shaqeeyay qiyaastii shan boqol oo hektar oo geedo beero ah, dhul beereed, iyo kaniisad qiyaastii toddobaatan mayl woqooyi ka xigta Magaalada New York. Markii hantida la iibiyay Percival waxay haysay ilaa siddeetan hektar. Waxay ahayd halkaas, oo u dhow Highland, NY, halkaas oo uu deganaa bilaha xagaaga oo uu waqtigiisa u huray shaqada joogtada ah ee qoraalladiisa.
1912 Percival wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo waxyaabaha buuggu ka kooban yahay nidaamkiisa fikirka oo dhameystiran. Sababtoo ah jirkiisu inuu ahaado mid deggan inta uu fekerayo, wuu sheegaa markasta oo gargaar la heli karo. Sannadkii 1932 ayaa qoraalkii ugu horreeyey la dhammaystiray lana yeedhay Sharciga Fikirka. Ma uusan dhiibin fikrado ama gabagabo. Saas ma aha, wuxuu ka warbixiyay wixii uu ku miyir qabay adoo adeegsanaya feker joogto ah. Cinwaanka ayaa loo beddelay Fikirka iyo Dareenka, Buuggiina waxaa ugu dambayntii la daabacay 1946. Sidaas awgeed, hal-kun-bog oo mucjiso ah oo faahfaahin muhiim ah ka bixinaya aadanaha iyo xiriirka aan la leenahay koonka iyo wixii ka dambeeya waxaa la soo saaray muddo soddon iyo afar sano ah. Kadib, 1951, ayuu daabacay Man iyo Naag iyo Cunug iyo, sanadkii 1952, Masonry iyo Astaamaheeda—In Light of Fikirka iyo Dareenka, iyo Dimuqraadiyaddu Waa Is-Dawladnimo.
Laga soo bilaabo 1904 ilaa 1917, Percival ayaa daabacday majaladda bil kasta, Ereyga, taasi waxay lahayd wareeg caalami ah. Qorayaal badan oo caan ah ayaa maalintaas wax ku darsaday, dhammaan arrimahaasna waxaa ku jiray maqaal uu qoray Percival sidoo kale. Tifaftirradan waxaa lagu soo bandhigay mid kasta oo ka mid ah 156 arrimood oo uu boos ka helay Kuma Ayaa Ayaa Ah Mareykanka. Aasaaska Word wuxuu bilaabay taxane labaad oo ah Word The sanadkii 1986 oo ah joornaal saddex biloodle ah oo ay heli karaan xubnihiisu.
Mudane Percival wuxuu ku dhintey sababihii dabiiciga ahaa bishii Maarso 6, 1953 magaalada New York. Jidhkiisa ayaa la gubay iyadoo loo eegayo sida uu doonayo. Waxaa la sheegay in qofna uusan la kulmi karin Percival isaga oo aan dareemin inuu ama isagu la kulmay qof bini aadam ah oo runtii cajiib ah, oo awooddiisa iyo awooddiisa la dareemi karo. Xikmaddiisa oo dhan, wuxuu ku sii ahaaday mid jilicsan oo suubban, nin sharaf leh oo daacadnimo aan la halaabi karin, saaxiib diiran oo naxariis leh. Wuxuu had iyo jeer diyaar u ahaa inuu caawiyo qof kasta oo raadinaya, laakiin waligiis iskuma dayin inuu falsafadiisa ku soo rogo qofna. Wuxuu ahaa nin aad u jecel akhristaha maadooyinka kaladuwan wuxuuna lahaa dano badan, oo ay kamid yihiin dhacdooyinka taagan, siyaasada, dhaqaalaha, taariikhda, sawirada, beerashada iyo cilmiga dhirta. Marka laga reebo hibada uu u leeyahay qorista, Percival wuxuu u nugul yahay xisaabta iyo luqadaha, gaar ahaan heerka Giriigga iyo Cibraaniga; laakiin waxaa la sheegay in mar walba laga hor istaago inuu wax sameeyo mooyee wixii uu sida muuqata halkan u joogay inuu sameeyo.
Harold W. Percival buugaagtiisa iyo qoraalladiisa kale waxay ku muujinayaan xaaladda dhabta ah, iyo kartida, ee aadanaha.